WARBIXIN: Maxaa Fashiliyay Kacdoonnada Muqdisho, Ee Madaxtooyada Gilgilay? | Banaadir Times
HomeXulashadaWARBIXIN: Maxaa Fashiliyay Kacdoonnada Muqdisho, Ee Madaxtooyada Gilgilay?
WARBIXIN: Maxaa Fashiliyay Kacdoonnada Muqdisho, Ee Madaxtooyada Gilgilay?
Magaalada Muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa 48kii saacaddood ee lasoo dhaafay ay marti u aheyd dhinacyo hubeysan oo is diidan, dhinacyadaas oo midba midka kale uu ka baqdin qabo in uu dagaal kusoo qaado.
Maanta oo Jimco aheyd waxaa la filaayay in muqdisho uu ka dhaco mid kamid ah dibadbaxyadii ugu weynaa ee Caasimadda ka dhaca, laakin xaalku sidii la filaayay ma noqon oo Mudaaharaadyada waxaa bedddlay Isku dhacyo hubeysan oo dhexmaray ciidamada ammaanka ee dowladda iyo maleeshiyaad qaab beel u hubeysan oo ilaalo u ah musharrixiinta mucaarada ah.
Xalay saqdhexe waxaa Marqura Magaalada ka bilaabatay Rasaas culus oo noocya kala duwan leh ka gadaal markii ay isku dhaceen Ciidamada dowladda iyo kuwa Mucaaradka Waardiyaha ka haya, Iska hor imaadka oo socday muddo 30 daqiiqo ku dhaw ayaa ugu dabmeyn dhinacyadii dagaallamay ay si iskood ah dagaalka ku joojiyeen iyadoo aan cidna waan waan kala dhex dhigin.
Shacabka muqdisho xalay inbadan oo kamid ah hurdo kama aysan soo dhicin oo waxaa dhagahooda ka guuxaayay dhawaqa Dhiilo colaadeed oo lagu daray Rasaas Nool nool oo jihooyin badan oo Magaalada ah ka dhaceysay.
Marka uu saaka waagu baryay waxaa marqur lagu toosay ciidamo aad u hubeysan oo dowladda ay tan iyo xalay ku daadisay jidadka halbowlayaasha ah ee caasimadda, ciidanku wuxuu la wareegay Xaruntii xudunta u aheyd dibadbaxa ee taalada daljirka daahsoon taasi oo dhabarka ka jabisay musharrixiinta iyo taageerayaashooda doonaayay in ay saakay wacdaro ka dhigaan taalada daljirka daahsoon.
Musharrixiinta kala ah shariif iyo xasan shiikh oo halboowle u ahaa bannaanbaxa ayaan saakay lagu arag fagaarayaasha Dibadbaxa, durbadiiba waxaa la suureystay in labada madaxweyne hore ay xabsi guri ku yihiin hotelka Maa’ida Ex Naasa-hablood2 oo ay daganaayeen kaasi oo xalay la sheegay in dagaalka uu ka dhacay.
Dhinaca kale waxaa Dibadbax kooban Magaalada ka sameeyay Musharrixiin ay kamid yihiin, xasan cali kheyre, C/raxmaan cabdi shakuur, C/kariim guulled, xildhibaan mahad salaad iyo xubno kale oo mas’uuliyiin ah, balse mudaaharaadka marka uu socday muddo ku dhaw 20 Daqiiqo waxaa Bannaanbaxayaashii ay horkacayeen Madaxda lagu kala eryay Rasaas Nool nool oo ciidamada ammaanka ay ku kala eryayeen dibadbaxayaasha.
Intaas kadib musharrixiinta ayaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay waxaana ay iclaamiyeen in madaxweyne farmaajo yahay dambiile dagaal aysanna marnaba doorasho la gali doonin wixii hadda ka dambeeya.
MADAXWEYNYUHU XAGEE KU SUGANYAHAY HADDA?
Tan iyo xalay waxaa soo baxayay warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu ka cararay Villa Soomaaliya uuna ku suganyahay Xarunta Xalane, balse ilo xog ogaal ah oo Banaadirtimes ay la xidhiidhay ayaa noo xaqiijiyay madaxweynaha in uu weli ku suganyahay madaxtooyada villa somaalia, balse ay jirto baqdin ku aadan in kacdoonku saameyn ku yeesho villada cad ee dalka looga arrimiyo.
Hadalka aad loo wada sugaayay ee shacab iyo musharrixiinba ay dhagta u raaricinayeen wuxuu ahaa hadalka Ra,isul wasaaraha xukuumadda Oo Duhurnimadii maanta la hadlay shacabka, Ra&apos;isul wasaare rooble ayaana si aan ka leex leexasho laheyn u naqdiyay oo uga soo horjeestay falalkii xalay ilaa iyo saakay ka dhacay muqdisho, wuxuuna cod dheer ku yiri “Marnaba Ma aqbaleyno Bannanbax ay horkacayaan Maleeshiyaad hubeysan oo kasoo horjeed Ciidamada Ammaanka”
Ra’isul wasaaruhu wuxuu markale ku baaqay in miiska wada hadalka la&apos;isugu yimaado isagoona meesha ka saaray markale tuhunka la xidhiidha in dalka doorasho ay ka dhaceyso, wuxuuna musharrixiinta u balan qaaday in dalka doorasho ka dhaceyso taasi oo heshiis iyo wadar oggol lagu yahay.
HADDA XAALKA CAASIMADDA WAA SIDEE?
Xaaladda Muqdisho ayaa hadda dagan waxaana weli xiran inta badan waddooyinka muqdisho, sidoo kale waxaa qeybo badan lagu arkaya ciidamo hubeysan oo aan aheyn kuwa dowladda.
Dareenka shacabka muqdisho ayaa ah mid baqdin ah, waxaana laga cabsanaya isku dhac kale maadama ay weli magaalada iskula suganyihiin Ciidamo is diidan oo hubeysan.
Ugu dambeyn waxaan alle ka baryeynaa in Magaalada uu nabad nooga dhigo.
Previous articleDEG DEG: Ciidamada Amisom ee Muqdisho Oo Amar Culus la siiyay, “Isticmaala Awood Haddii….
Next articleDowladda oo War Cusub kasoo saartay rabshadihii ka dhacay Muqdisho